Goridhe Maple Musangano Wegore Negore Show!
Nanchang Fontainebleau Paiting Zvishandiso Industrial Co, Ltd ine musangano wepagore munguva pfupi yapfuura. Vechidiki uye vazhinji vechidiki vanotora muboka iri, uye isu tinotenda Fontainebleau ichave yakasarudzika sarudzo yevanhu. Kana iwe uine chero kufarira, huya ubatane nesu!
Artist Paint Brush ine Rwendo kuenda kuUK
Goridhe Maple Artist pendi bhurasho fekitori yakanga yapedza 10000 seti bhurasho uye aya makatoni akagadzirira ngarava kuUK. Gadzirisa dhizaini dhizaina kune yedu mutengi, kana iwe uine chero chikumbiro cheOEM ndapota inzwa wakasununguka kutirovera runhare.
Nzira yekutenga sei watercolor artiest pendi mabrashi evatangi?
Vatangi vanotenga sei mvuracolor Artist kupenda mabhurashi? Aya anotevera mamwe ma parameter akakosha andakapfupisa pakutenga mabhurasho aya. Kutanga, chimiro chebrashi Kazhinji, brashi rakatenderera rinonyanya kushandiswa. Mazhinji acho anogona kuve akapatsanurwa, saka ini handizo pinda mune zvakadzama pano ....
Nzira yekusarudza yakanakisa pendi bhurashi kune vanotanga?
Mhando dzemhando yepamusoro yekupenda mabhurashi atinowanzoshandisa kupenda ndeaya anotevera: Rudzi rwekutanga ndeyakasikwa fiber, inova bristles. Kusanganisira bristles, mhumhi bvudzi, mink bvudzi uye zvichingodaro. Chikamu chechipiri chemakemikari fiber. Isu tinowanzo shandisa nylon. Bristles Nyowani artiest yekupenda bhurashi inotengwa kuti iite ...
Nzira yekusiyanisa chaiyo uye yekunyepedzera bristle brushes?
Maitiro ekutsvaira Dhonza imwe yemabristles kubva mubhurasho uye upise nemoto. Iko kune hwema hwekupisa panguva yekupisa, uye inoshanduka kuita dota mushure mekutsva. Aya ndiwo mabharanzi chaiwo. Iyo bristles yenhema haina kunaka kana ine hwema hwepurasitiki kana ichinge yatsva. Mushure mekuve ...
Nzira yekusiyanisa pakati pebhurosi bhurashi uye nylon bhurashi?
Tarisa chikamu chemuchinjikwa Chikamu chemuchinjikwa chenyloni chinopenya, asi mabristles haasi. Iyi nzira inogona kuzivikanwa nemeso, asi mhando yenylon yakapfava, uye chikamu chemuchinjikwa chidiki, saka chinotaridzika chisina kusiyana nenguruve bristles. Tichitarisa chikamu chemuchinjikwa, ino m ...